VZ Navigator ... ကျွန်ုပ်မှာ GPS ရှိပြီ။ ဘာလဲ?! | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, သြဂုတ်လ 28, 2007 တနင်္လာနေ့, သြဂုတ်လ 24, 2009 Douglas Karr
ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်း - တိုတို - ငါ့ဖုန်းကိုဖဲ့။ နှုတ်ယူပြီး အာမခံနှင့်အတူဒေါ်လာ ၅၀၊ GPS အသုံးပြုနိုင်သည့်ဖုန်းအသစ်သည်ဒေါ်လာ ၃၀ ဖြစ်သည်။ သင်ယူရရှိသောသင်ခန်းစာ - ကျွန်ုပ်သည်ဖုန်းအာမခံကိုဘယ်သောအခါမျှရရှိမည်မဟုတ်ပါ
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည် GPS အသုံးပြုနိုင်သည့်ဖုန်းရရှိရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ငါ "enabled" ဟုပြောသည်သတိပြုပါ စစ်မှန်တဲ့ Verizon ကြိုးမဲ့ဖက်ရှင်မှာ၊ သင်ကအရာအားလုံးနဲ့အရာအားလုံးအတွက်ပေးဆပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။ GPS package ကို VZ Navigator ဟုခေါ်ပြီးတစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၉.၉၉ ဖြစ်သည်။ ငါက GIS အခွံမာသီးဒါကြောင့်ငါကကြိုးစားခဲ့ကြရသည်။
၎င်းသည် (ကျွန်ုပ်မှားလျှင်ကျွန်ုပ်ကိုအမှားပြင်ပေးရန်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ခံစားရသည်) ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်အားအချက်နှစ်ချက်ကိုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည် -
ဘယ်မှာကြည့်ပါ ငါဖြစ်၏ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွင့်ပြုသရွေ့ငါသာ ၀ င်ရောက်နိုင်တဲ့အွန်လိုင်းမြေပုံပေါ်မှာ။ (ဟမ်?) အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံကိုကြည့်ပါ။ အိမ်မှာနေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
ဘယ်မှာကြည့်ပါ ငါဖြစ်၏ ငါ့ဖုန်းပေါ်မှာမြေပုံပေါ်မှာ။
ကျွန်ုပ်၏တည်နေရာကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျမှတစ်ဆင့်အခြားဖုန်းတစ်စောင်ပို့ပါ (စာသားမက်ဆေ့ခ်ျခကောက်ခံသည်။ ) မှသာ သူတို့အဖြစ်ကောင်းစွာ Verizon နှင့်အတူရှိကြ၏။
ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းမှလမ်းညွှန်များကိုရယူပါ (မဟုတ် အဆိုပါ VZ Navigator က်ဘ်ဆိုက်ကနေ) ။ ၎င်းသည်အလွန်သေးငယ်သော weeny မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်များစွာလွယ်ကူသည်။
အနီးအနားရှိပစ္စည်းများကိုဖုန်းပေါ်ရှိမြေပုံဖြင့်ရှာဖွေပါ။ (Verizon သည်ကျွန်ုပ်ထင်သောဤပေးဆောင်ရသော ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ကြော်ငြာဝင်ငွေအချို့ရနိုင်သည်) ။
ဒါကြောင့် ... အကယ်၍ ကျွန်တော်သည်မီးတောက်လောင်သောကားတစ်စီးထဲတွင်သေလျှင်တစ်ကိုယ်တည်းပြောင်းဖူးလယ်ကွင်း၌ပျက်ကျခဲ့လျှင်၊ ၉-၁-၁ သည်ငါ့ကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်အစိုးရမှတစ်နည်းနည်းဖြင့်ပစ်မှတ်ထားခံရလျှင်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုရှာတွေ့နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ကလေးတွေလား။ Nope ။ Verizon ၏ VZ Navigator ၀ န်ဆောင်မှုအပြင်ဘက်တွင်ကျွန်ုပ်၏တည်နေရာကိုအလိုအလျှောက်မည်သည့်နေရာ၌မျှထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုနိုင်သောကြောင့်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုရှာမတွေ့ပါ။
Verizon … Verizon ရှိမည်သူမဆို… အကယ်၍ သင်ဖတ်နေလျှင်…အများပြည်သူစားသုံးရန်အတွက်အဘယ်ကြောင့်ဤအရာကိုဖွင့်မထားသနည်း?! ကျွန်ုပ်၏တည်နေရာကိုလူသိရှင်ကြားဖြစ်စေလိုပါကကျွန်ုပ်အနေဖြင့်လူသိရှင်ကြားတင်သင့်ပါသည်။ ပိုကောင်းတာတောင်မှသူကအသုံးချတဲ့ application တစ်ခုကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကြီးပြင်းသည်! နည်းပညာကိုပိတ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်သူငယ်ချင်းများအား Verizon နှင့်သွားရန်စကားပြောရန်မကြိုးစားတော့မြေပုံတည်နေရာများကိုတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ပို့နိုင်သည်။ ကောင်းပြီ
ကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူထံမှများစွာသောစိတ်ပျက်ခြင်း။ ဘယ်အချိန်မှာသင်ယူမလဲ
AC / DC ဖုန်းမြည်သံအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်လုံးဝစိတ်ပျက်မိမှာပါ။
Colts.com မှ Browser Market Share တွင်ဆက်လက်လေ့လာပါ
သြဂုတ်လ 29 ရက် 2007 ခုနှစ် 12:56 နာရီ
GPS သည် သင့်ကားထဲတွင်မရှိလျှင် အမှိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါ့ဖုန်းထဲမှာ ရှိပြီး သုံးဖို့တောင် မကြိုးစားဖူးဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါက မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ငါဘယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာ အမြဲသိတယ်။ အရမ်းရယ်ရတယ်
Verizon လောက်တော့ မင်းကို ငါပြောနိုင်တယ်၊ သူတို့က မင်းကို ဒါမှမဟုတ် မင်းဝယ်တဲ့ အစီအစဉ်ကို ဂရုမစိုက်ဘူး။ ၎င်းတို့၏ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသည် ဆယ်လူလာဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဆယ်လူလာဝန်ဆောင်မှုကို တွန်းအားပေးမည်မဟုတ်သော်လည်း၊ AC/DC သည် တုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်ကောင်းသည်ဟု ပြောပါမည်။
သြဂုတ်လ 29 ရက် 2007 ခုနှစ် 3:39 နာရီ
$30? ငါ့သမီးရဲ့ဖုန်းက ပြတ်ပြတ်သားသားဖြစ်နေတယ်၊ ​​ငါတို့မှာ Verizon ရှိတယ်၊ ဇန်န၀ါရီလမတိုင်ခင်မှာ သူရနိုင်တဲ့ ဈေးအသက်သာဆုံးဖုန်းက ဒေါ်လာ ၁၄၀ လောက်ရှိတယ်...သူမက “ghetto” လို့ ခေါ်တဲ့ ဖုန်းတစ်လုံး။ သင့်စာချုပ်ကို သက်တမ်းတိုးရန် အချိန်မတန်သေးပါက ဖုန်းများ မည်မျှစျေးကြီးသည်ကို ကျွန်ုပ်မယုံနိုင်ပါ။ သူတို့ရဲ့ ဖုန်းတွေဟာ ၂ နှစ်တောင် မကြာတော့ပါဘူး။
ဒါဆို ဖုန်းကို $30 နဲ့ ဘယ်လိုရလာတာလဲ ပြောပြပါ
သြဂုတ်လ 29 ရက် 2007 ခုနှစ် 7:36 နာရီ
ကျွန်ုပ်၏ 'အခမဲ့ အဆင့်မြှင့်ခြင်း' သည် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဖြစ်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်သည် ယခုလေးတင်အွန်လိုင်းသို့သွားကာ ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းနံပါတ်ကိုရွေးချယ်ကာ အဆင့်မြှင့်ထားသောဖုန်းကို ရွေးချယ်လိုက်ရာ ကျွန်ုပ်အား စာရင်းပေးထားပါသည်။ ဟုတ်တယ်၊ ငါက ငါ့စာချုပ်ကို သက်တမ်းတိုးရမယ် - ဒီကောင်တွေကို နောက်ထပ် နှစ်နှစ်လောက် ကျွန်ခံခဲ့တယ်။
ကျွန်ုပ်သည် AT&T နှင့် Sprint ရှိသော ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းအားလုံးကို မုန်းတီးနေပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် အခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါ။